Barcelona Iyo Real Madrid Oo Isku Garab Dhacay Ciyaar Aheyd Bandhigii Messi Iyo Ronaldo. - jornalizem
Barcelona Iyo Real Madrid Oo Isku Garab Dhacay Ciyaar Aheyd Bandhigii Messi Iyo Ronaldo.
Barcelona iyo Real Madrid ayaa isku garab dhacay ciyaar xiiso laheyd oo ka dhacday Camp Nou, iyadoo Messi iyo Ronaldo ay min labo gool isweydaarsadeen.
Iyadoo Barcelona ay ku bilaabatay kubad baas ku dhisan ayaa waxaa hogaanka ciyaarta qabatay kooxda martida aheyd ee Real Madrid ka dib markii kubad ay si fiican isagu soo dhiidhiibeen uu shabaqa ku hubsaday Cristiano Ronaldo kaasoo xagal qaloocan shabaqa ka geliyay daqiiqadii 23aad.
Ronaldo ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee lix kulan oo isku xigta oo El Clasico ah shabaqa soo taabta.
Labo daqiiqo ka dibna Real Madrid ayaa waxaa soo martay fursad qaali ah oo ay hogaanka ku dheereysan kareen, ka dib markii Benzema ay kubad ka beenisay birta islamarkaana kubadii soo laabatay uu banaanka u saaray Di Maria.
Barcelona oo kubada inta badan isku dhiidhiibeysay ayaa heshay goolka barbaraha daqiiqadii 30aad markii kubad uu lugta si qaldan ugu dhuftay Pepe uu afaafka hore ee goolka uu ku helay xiddigooda Lionel Messi kaasoo dhinac ka dhigay goolhaye Iker Casillas.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro 1-1 ah, iyadoo Barca ay aheyd kooxda kubada heysatay, halka Madrid ay abuurtay fursado ka badan kuwa Barcelona.
Waxaana qeybtii labaad oo sida caadiga ah ay kubada iska heysatay Barcelona ay keentay in daqiiqadii 60aad uu hogaanka u dhiibo Barcelona xiddigooda Lionel Messi, kaasoo laad xor oo cajiib ah dabamariyay goolhaye Iker Casillas.
Messi ayaana goolkaas uu u ahaa goolkiisii 17aad ee uu ka dhaliyo kooxda Real Madrid.
6 daqiiqo ka dib Cristaino Ronaldo ayaa isna markiisa ka jawaabay goolkii Messi, waxaana uu u barbareeyay kooxda Real Madrid islamarkaana waxa uu dhaliyay goolkiisii labaad ee ciyaarta ka dib markii uu baas qatar ah ka helay Mesut Ozil.
Dhamaadkii ciyaarta daqiiqadii 88aad ayaa Montoya uu u soo dhawaaday inuu goolka guusha u dhaliyo Barcelona, laakiin darbadiisa xooga laheyd ayaa waxaa soo beenisay birta goolka Real Madrid.
Barbarahan ayaa waxa ay keeneysaa in 7 kulan oo La Liga oo la ciyaaray in Barcelona ay weli 8 dhibcood ka sareyso kooxda difaacaneysa horyaalka La Liga.